> Resource > Video > TP magaabay: Sida loo jar TP Files aan loo gaysto Quality
Files TP ayaa inta badan abuuray cajalado by kaarka tuner TV socon ilo TV sida analog ah ama digital cable, satellite, ama anteeno. Qaab file Tani waa sare ee tayada sawirka iyo Eebay tirada file aad u ballaaran. Waxaad ogaan kartaa in dhowr daqiiqo ee video imaan karaa in dhowr boqol oo megabytes ama wax ka sii badan 1GB. Upload filimada, kuwaas oo online qaadan kartaa saacadood in la sii wado, oo kuwanu filse TP weyn oo aad u badan oo ah meel aad kaydinta qaadan doonaa. Sidaas darteed, waa loo baahan yahay wax caadi ah in ay iyaga ku dhex baabbi'in gaaban, ama cadaadin iyaga oo yar yar. In tutorial, waxa aad baran doontaa sida loo gooyay files TP effortlessly la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ).
1 files Import TP
Ka dib markii ay ku rakibidda magaabay TP this, waxa maamula. Daaqadda barnaamijka, fadlan guji "Import" in ay ku shuban TP videos aad. Dhammaan TP videos daray tusi doonaa sida thumbnails in User ee Album. Ka dib markii in, jiididda iyo si toos ah hoos u files TP aad galay Timeline video ah.
2 Goo TP videos
Waxaad isticmaali kartaa tan xirfad software video magaabay si ay u dhinto meel ka mid ah TP video. Just raac tallaabooyinka hoos ku qoran.
Iska yaree bilowga / dhamaadka : marka hore u guuraan cas Time Tusiyaha meeshii aad rabto in aad la gooyaa, ka dibna ku dhuftay icon Sissor si ay u kala jabeen laba qaybood oo qayb ka. Ka dib markii in, wax yar ka tirtirto wixii aad uma baahna.
Iska yaree boos kasta dhexe : Play video shaashadda midig, iyo marka ay timaado barta saxda ah, waxaa loo joojiyo. Hadda ka dhacay icon Sissor si ay u kala qaybsan tahay. Talaabadani waxay celi mar kale iyo mar kale ilaa aad ka soo qaado baxay dhammaan qaybaha aan loo baahnayn. Ugu dambeyntii, waxa ka saar oo ay la tirtiro.
Talooyin : Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, aad tegayna ama u ogalanaya la isticmaalayo qalab ee toolbar ee ku haboon.
3 dhoofinta file cusub ee TP
Hit Abuur in la furo dariishadaha wax soo saarka. Halkan, waxaad dooran kartaa in aad dhoofin files cut TP dhammaan qaabab caan ah oo loo maqli haboon on your computer iyo qalabka. Sidoo kale, waxa aad la wadaagi karto on YouTube ama Facebook, gub, oo iyaga si DVD ilaalinta muddo dheer.
Talooyin: Waxaad sii kara in la yareeyo xajmiga file TP ay qabsato paremeters sida heerka yara, heerka jir, xallinta, iwm Si aad u samayn, riix "Settings Advanced" u muujiyo guddi goobaha.
Fiiri hoos video tutorial ku saabsan sida loo gooyay files TP talaabo talaabo ah:
TP in DVD - Sida loo rogo ama Guba iyo TP in DVD